“Waad guuldareysan doontaa hadii aad ka tagto Real Madrid”… Jorge Valdano oo fariin digniin ah u diray Cristiano Ronaldo – Gool FM
“Waad guuldareysan doontaa hadii aad ka tagto Real Madrid”… Jorge Valdano oo fariin digniin ah u diray Cristiano Ronaldo
Dajiye July 9, 2018
(Real Madrid) 09 Luulyo 2018. Ronaldo ayaa qarka u saaran inuu ugu dhaqaaqo Juventus aduun dhan 100 milyan euro, wuxuuna sidoo kale sanadii mushaar ahaan u qaadan doonaa aduun lacageed dhan 30 milyan euro.
Agaasimahii hore ciyaaraha kooxda Real Madrid Jorge Valdano ayaa la hadlay “AS” wuxuuna u sheegay in go’aanka uu Cristiano Ronaldo ugu dhaqaaqayo kooxda Juventus uu yahay mid uu kala kulmi doono qasaaro xoogan.
“Ka tagista Real Madrid ma ah go’aan xikmad leh, Ronaldo waa nin caqli badan, laakiin hadii uu baxo wuxuu guuldareesan doonaa in ka badan Real Madrid”.
“Uma maleynayo inaan heli doono Messi cusub ama Cristiano cusub mustaqbalka, waa laba bahal ee kubada cagta”.
Ashley Young oo kalsooni weyn ka muujiyay in xulka qaranka England uu ku guuleysan doono koobka aduunka 2018
Macalinka xulka qaranka Ruusia Stanislav Cherchesov oo ka warbixiyay xulka uu taageeri doono koobka aduunka 2018